भूकम्प पीडितलाई राहतको नमूनायोग्य काम - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
भूकम्प पीडितलाई राहतको नमूनायोग्य काम
Published On : २१ बैशाख २०७५, शुक्रबार १३:१६
स्थानीय चुनावमा होओस् वा प्रदेश वा संघीय चुनावमा सबै उम्मेद्वारहरुले बिभिन्न खालका आश्वासन बाँडे । आफूले जितेमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने आश्वास पनि बाँडे, गर्न नसक्ने उँडन्ते आश्वास पनि बाँडे । पराजित हुने त भए, जित्नेले पनि आश्वासन पूरा गर्नेतर्फ प्रयास गरेको देखिएन । त्यसको एउटा प्रमुख कारण थियो, पूरा गर्न नसक्ने उँडन्ते आश्वासन थियो ।
आरुघाट गाउँपालिकाले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ र कार्यान्वयन पनि गरेको छ । भूकम्प पीडितलाई नीजि आवास निर्माणका लागि एकलाख रुपियाँ ऋण दिने कार्यक्रम उसको मौलिक खालको कार्यक्रम हो । जसले जग हाल्ने, काम थाल्ने पैसा पनि नपाएर काम थालेको छैन, उसलाई एकलाख रुपियाँ ऋण दिने गरेको छ । अहिलेसम्म २७ जनालाई त्यसरी ऋण दिएको बताइएको छ । यसले गर्दा कम्तीमा काम थाल्न त सक्छ । एकलाख खर्च गरेर डिपिसी गरेपछि त दोस्रो किस्ताको डेढलाख आउँछ अनि थप काम गर्न सकिन्छ । यस्ता खालका रचनात्मक, मौलिक खालका काम गरेमा सेवाग्राहीले पनि सेवा पाउँछन्, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुको लोकप्रियता पनि पक्कै बढ्नेछ ।
गोरखामा विजयी जनप्रतिनिधिहरु सबै इच्छाशक्ति भएका नै देखिन्छन् । उनीहरुले थप सुझबुझका साथ भूकम्प पीडितका लागि राहत पुग्ने खालका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने गोरखामा सबैभन्दा खाँचो भूकम्पले भत्किएका नीजि आवास निर्माणको हो । त्यसलाई सम्बोधन हुने खालका काम गर्दा प्रभावकारी हुनेछ ।